Super lehibe isan-karazany tsy tapaka famerenam-bola herinaratra Module mpamokatra, mpamatsy - China Super malalaka isan-karazany tsy tapaka herinaratra famakiana Module Factory
Modely fiampangana EV
Module famerana fiarovana avo lenta IP65
Modely famerenam-pahefana mahery tsy tapaka
40KW modely famerana fahombiazana avo lenta
30KW modely famerana fahombiazana avo lenta
20KW Module famerenam-bidy avo lenta
15KW Module famerana fahombiazana avo lenta
Modely fitehirizana sy angovo fitehirizana
IP65 fiarovana avo lenta ...
UR100020-SW EV fiampangana modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika mafana sy azo ampiharina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hahazoana antoka fa azo itokisana.
UR100030-SW (B) modely famandrihana EV novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika tarehy. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
UR100040-SW EV fiampangana modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika tarehy. Ny teknika fanaraha-maso nomerika mafana sy azo ampiharina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hahazoana antoka fa azo itokisana.
UR75028-SW EV fiampangana modely novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.